YAA KA MASUULA SHIRQOOLKA LOO MALEEGAY KULMIYE EE FASHILMAY? | Toggaherer's Blog
« KAADHKII UGU DANBEEYEY SHAXDA MADAW EE UDUB
SI XUN WAX U SHEEG SIXIR KA DARAN!!!!!!! »
YAA KA MASUULA SHIRQOOLKA LOO MALEEGAY KULMIYE EE FASHILMAY?
Yaa ka massuula shirqoolka loo maleegay kulmiye ee fashilmay?
By: DR. Cali Yoonis Guure
Sida la wada ogsoonyahay Waxaynu leenahay distoor si fiican u sharaxaya xuquuqda shacbiga, axsaabta, iyo dalkuba ay u leeyihiin inay ka banaanbaxaan dareenkoodana ku muujiyaan banaanbax. Hadaba, xisbiga KULMIYE sida aynu ka war qabno wuxuu 6-dii bishan qabtay khudbad loogu dabaaldagayo xuska maalinta SNM. Khudbadan dhamaadkeedii ayaa hadaba hogaanka xisbiga kulmiye damaciisu ahaa in uu tago guriga gudoomiyaha. Halkaa waxa soo garab galay oo soo galbinayey gudoomiyaha iyo madaxda kulmiye shacab aad u balaadhan iyo taageerayaasha xisbiga iyagoo ku dhawaaqayey taageerada xisbiga, kalsoonida ay ku qabaan xisbiga kulmiye iyo dareenkooda sida ay uga niyad jabsanyihiin dawlada haatan jirta. Shacabka halkaa marayey waxa hareero socday ciidamada amaanka ee dalka .
Ciidanka qaranka ee amaanka ilaalinayey ayaa si hab’sami ku dheehantahay shacabka u ilaalinayey iyadoo shacabkuna ogsoonyihiin in ciidanku yahay ciidankoodii oo ilaalinaya amaankooga. Ciidanku runtii sida ka muuqatay waxay garanayeen in shacabku yahay koogii nabaduna toodii, shacabkuna sidoo kale waxay garawsanaayeen oo ilaalinayeey inay nabadu tahay tooda dalku kooga, askartuna toodiii. Hadaba, maxaa sababay in shacabkii askar khaas ah oo madaxtooyadu soo xushay rasaas huwiyaan shacabka?
Askarta Rasaasta huwisay shacabka sida nabadgelyada leh ku marayey wadada kuna sii galbinayey hogaanka kulmiye, ayaa sida naloo xaqiijiyey ahayd askar laga soo diray madaxtooyada Somaliland gaar ahaan ilaalada madaxwaynaha. Waxa dhacday dadka oo wadada socda oo ciidanka amaankuna hareero socdaan in baabuur laga soo diray madaxtooyada oo askarta ilaaladu saarantahay iyo askar kale uu ka horyimid shacabkii. Isla markaa waxa shacabkii rasaas ku bilaabay askarta madaxtooyada ilaalisa qaar ka mid ah. Sida la xaqiijiyey shacabkuna garanayeen waxa ka mid ahaa askartaa nin askari ah oo ay madaxweynaha isku jilib hoose yihiin oo la yidhaa banbiida iyo waliba tiraba inta shacabku garanayey ilaa sedex nin oo kale oo isla jilibka madaxweynaha ah.
Damaca ciidanka ilaalada madaxweynaha ayaa hadaba ahaa mid laga soo sheqeeyey oo runtii loogu talo galay in ay tacshiirad huwiyaan shacabka. Ka bacdi damacooda loogu talo galay wuxuu ahaa inay kolka askarta kale iyo shacabku isku dhacaan in ay iyagu xabada hoos ugu dhigaan hogaanka xisbiga kulmiye. Waxa damacoodu ahaa in kolka ay toogtaan madaxda kumiye iyagoo dharkii police ka loo soo galiyey.Qorshuhu wuxuu ahaa in hadhaw la yidhaa ciidanka bilaysku rasaastii ay isku dufaacayeen ayaa si kadis ah ugu dhacday hogaanka. Waxay ahayd shirqool ay soo maleegtay madaxtooyadu.
Ninka la yidhaa banbiido oo ay madaxweynaha ilmaadeeryihiin ayaa hadaba waxa la sheegay in ay isku dhaceen askartii kale ee la socotay kolkii ay rasaasta furayeen isaga iyo kuwii kale ee ay isla ogaayeen hawshu. Waxa dhacday sida askartii kale sheegtay ee gaadhiga la saarnayd in askarta nin ka mid ahaa ku yidhi rasaasta ka daa dadka yaa ku yidhi rasaasee iyagoo aan nabada wax u dhimayn. Wuxuu banbiido ku jawaabay adeer anagaad dirayska noo sidaaaye yeel waxa aanu kuu sheegno adigu askari xunbaa tahaye. Waxa kale naloo xaqiijiyey in ninkaasi uu askarta snm ka mid ahayd uu aflagaadeeyo. Waxa la xaqiijiyey in uu ku yidhaa waxaad tahay qudhmis xun ee anagaad dirayska noo sidataaye walaahi in ay injirtu idinku gali doonto qaaxo iyo meel daran. Waxa si badheedha oo cad uu ninkani ugu tuntaa sharciga isaga oo ah ilaaliyaha gaarka ah ee madaxweynaha isaga iyo nin kale oo ka mid ahaa ciidankii hangash oo ilaa 2002 gii ilaalin jiray Daahir Riyaale.
Hadaba maxaa keenay in shirqool dawladu u maleegto hogaanka KULMIYE iyadoo aynu ognahay halka uu inagaga yaalo hogaanka xisbigaasi? Waxa sababay iyadoo Daahir Riyaale amray in la tirtiro maalinta xuska SNM, in aan taariikhda SNM lagu dhiganin iskuulada oo uu mar hore ka saaray manhajka waxbarashada. Isla markaa waxa dugsiyada lagu dhigtaa taariikhdii Sayid Maxamed Cabdule Xassan. Waxa dadkii manifesto u taffo xayteen in ay tirtiraan taariikhda mujaahidiinta SNM, iyo in ay sumcada ka dilaan oo been iyo barabagaande ku faafiyaan intii SNM ka tirsanayd iyo raga ka naxaya dadka iyo dalka. Halgamayaashii SNM maanta shacabka Somaliland waxa uuga qiima badan NSS tii iyo hangash, koofiyad castii, dhabarjabintii, ciidamadii dabargoynta. Waxa ka qiimo badan SNM kuwii shacabka laynayey ee xadhiga, caddaadiska, cabudhinta, cago juglaynta, hatigaada, dhaca iyo boobka guryaha, dilka aan geedna loogu gabban kuwii gaystey.
Waxa keenay waxaas oo dambi ah inay ku dhiirato dawlada Rayaale shacabka oo ninkoodii xabadda iskaga dhigayey ayey dileen oo u dileen rag aan meelna u soo marin maandeeq. Cidda dawladu u ilaalinayso nabadu waa ayo? Waxa dawladu inaga dhaadhicinaysaa inay nabada u ilaalinayaan shacabka, isla markaa waxa dawladu xabaddaynaysaa waa shacabka. Haddii dawladu nabad u ilaalinayso shacabka, waxay wax ka qaban lahayd dagaalka ka socda satiile ee dhimashada iyo dhaawaca keenay. Dagaalka sumcadii dalka burburinaya ee ka dhigaya dal aan xasiloonayn oo daqiiqad kasta dagaal ka dhici karo, dal ictiraaf doon kiisu yahay mid isbadali kara oo ku biiri kara somaliya. Waxa lagu tumanayaa waa shacabka, waxa la boobayaa waa hantidii dalka iyo dalka, kuwa laga ilaalinayo nabada isu soo dhawaanshuhu waa shacabka. Kuwa xabada loo adeegsanayaa waa shacabka. Waxa dawladu hore shirqool la damacday Ururkii qaran madaxdiisii oo la sheegay in dawladu tidhi waa alqciida. Gudoomiye ku xigeenkii hore ee guddiga komishanka Xirsi cali X Xassan oo wasiirka arrimaha guduhu ku sheegay in uu xidhiidh la leeyahay Al-Shabbaab. Waxa la xidhxidhay culimo aw diin lagu qabsaday khudbadaha diinta ee ay jeediyaan. Xaga kale waxa dawladu sii daysay dadkii qaraxyada ka fuliyey hargeysa, waxa la sii daayey ragii hubka culus ee lidka diyaaradaha lagu qabtay.waxa dawladu sii daysay maxaabiistii dagaalka lagu qabtay ee ciidamada Somaliland ku laysay laas caanood. Waxa la sii daayey ragii gaalada ku laayey wadanka gudihiisa.
Haddaba, waa maxay damaca dawladu leedahay iyo raga la sheqeeya Daahir Riyaale? Waa maxay danaha laga leeyahay dalka iyo dadka ee ka taagan wadanku?
Shacabka Somaliland haddii aanay iska qaban Daahir Riyaale iyo Ragga la sheqeeya, waxa hubaal ah inay iibsan doonaan dalka iyo dadkaba. Waxa laydiin sheegaa in aynu nahay dal gaar ah oo xoriyadiisii la soo noqday, bal’se dalka Somaliland shacabkiisa iyo inta ka naxaysa ayaa laga ilaalinayaa oo sirro gaara ayaa jira oo dawladu wadato. Waayo waxa laydinka qariyaa oo aan dadku waxba ka ogayn shirarka madaxweynuhu la yeesho dawlada Somalia iyo inta siyaasada ugu jirta somaliya. Haddaba, intee in leeg ayay shacabku ku seexanayaan maaweelo iyo hees walwaaleedii caruurta? Waxa la yidhi mar I dagge alle ha daggo, mar labaadna anaa is’daggay.
DR: Cali Yoonis Guure.
This entry was posted on April 11, 2009 at 3:04 pm and is filed under 1.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.